Mayelana Nathi - Fuzhou Chuantuo Trading Co., Ltd.
Phansi & Insulated
Amabhantshi ama-3 ku-1
Izingubo Ezibonakalayo Eziphezulu
Ukulinganisa kwenkampani Fuzhou Chuantuo Trading Co., Ltd.
Siyisitudiyo sokuklama esikholelwa emandleni omklamo omuhle kakhulu.
Isekelwe e-Fuzhou / China, inkampani yethu ikhiqiza izinhlobo eziningi zemikhiqizo Yezingubo zangaphandle kanye Nezingubo Zokusebenza: Amabhantshi, Ama-Softshell, Ama-Bodywarmers, Ama-Polar Fleeces, Ama-raincoat, I-Windbreaker, Ukubonakala Okuphezulu, Amabhulukwe, Amaphinifa, njll.
Ukuhlanganisa isipiliyoni kanye nolwazi ekukhiqizeni izingubo eziyinkimbinkimbi ehlukahlukene, imboni yethu ikhethekile ekukhiqizeni izingubo zokusebenza ezenziwe ngokwezifiso, imifaniswano, izingubo zangaphandle kanye nezingubo zemvula ngenxa yokuguquguquka kwayo okubalulekile nokusebenza kabusha kwekhwalithi ephezulu eyenziwe ngokwezifiso ukukhiqizwa. Sinezindawo zokukhiqiza ze-7000 m2 ezinemishini ezenzakalelayo ngokuphelele futhi uhlelo lokugcina. Umthamo wethu wokukhiqiza ungama-600,000 izingcezu ngonyaka.
UMGOMO: Ukusebenza njengenkampani eyimodeli ekhiqiza ikhwalithi, entsha, ezwela imvelo, enobungani empilweni yabantu, izingubo ezivikelayo nezongayo.
Ukusebenza kwekhwalithi engashintshi ye-Trustop nesevisi kuvame ukudlula lokho okulindelwe amakhasimende ethu.
IZIDINGO ZAKHO, IZIMALI ZETHU
Senza ucwaningo lokuthi kungenzeka yini ngaphambi kwanoma iyiphi iphrojekthi entsha. Sikugcina ukwaziswa ngaso sonke isikhathi mayelana nenqubekelaphambili yokukhiqiza, futhi sigcina kahle kakhulu ukubonwa kweminqamulajuqu.
Kusukela ezintweni ezingavuthiwe (izindwangu eziqinisekisiwe ze-Oeko-Tex, izintambo ezifekethisiweyo ze-Madeira, njll) kuya kunqubo yokuthunga ngendlela yamasu okufaka uphawu, siqikelela ukuthi isinyathelo ngasinye sokukhiqiza sihlangabezana nenqubo engcono kakhulu yekhwalithi.
Kuwo wonke amaphrojekthi silazi kahle iqiniso lemakethe, yingakho sinikeza amanani ancintisanayo futhi siqinile ngemuva kokugunyazwa kwe-oda. Singakusiza ngemininingwane yobuchwepheshe yephrojekthi yakho (izindwangu, uhlobo lokwenza ngendlela oyifisayo...) ukuze uvumelanise ukunikezwa kwethu nokuma komkhiqizo.
Ucingo: 0086 15750885285
Isakhiwo sokuqala, No. 228 Chiqiao Road, JinAn district, Fuzhou, China
Bhalisela incwadi yethu yezindaba futhi ube ngowokuqala ukwazi ngemikhiqizo emisha nezaphulelo.